Shir looga hadlayay ammaanka iyo dib u dhiska Ciidamada Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Ankara – idalenews.com
Shir looga hadlayay ammaanka iyo dib u dhiska Ciidamada Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Ankara
Shir muhiim ah oo looga hadlayay ammaanka iyo dib u dhiska ciidamada qalabka sida ayaa lagu soo gaba gabeeyay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, iyadoo shirkaas ay soo qaban qaabisay dowladda Turkiga ay balan qaaday inay tababar iyo qalabeyn u sameyn doonto Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galay wakiilo ka kala socday Midowga Afrika, IGAD, Midowga Yurub, Qaramada Midoobey iyo dowladaha daneeya Soomaaliya, iyadoo wafdi uu hogaaminayay Wasiirka Gaashaandhiga C/xakiin Fiqi ay shirka ka qeyb galeen.
Intii uu socday shirkan ayaa waxaa looga hadlay qorshe si wadajir ah u soo diyaariyeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga, kaasoo ku saabsan in saddexda sano ee soo socota Soomaaliya loo dhiso Ciidamo awood leh, isla markaana hanta ammaanka guud ee dalka.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa u sheegay Idaacada dowladda ee Radio Muqdisho in waxyaabihii laga soo saaray la taageeray, isla markaana wixii haatan ka dambeeya ay Safaarada u xilsaaran tahay kormeerka arrintaas.
Qorshaha dib u dhiska ciidamada qalabka sida ayuu sheegay inay ku bixi doonto lacag gaareysa 10-milyan oo doolarka Mareykanka, waxaana uu xusay in Imaaraadka Carabta ay balan qaaday inay dhaqaale ku taageeri doonto hirgelinta qorshahan.
“Qorshahan shirka lagu ansixiyey wuxuu quseeyaa Ciidammada Xoogga Dalka iyo Booliiska Soomaaliyeed ayaga ayaa lagu sameyn doonaa dib u dhis waayo sida aad hada la socotaan Soomaaliya wey ka baxday hada KMG,qorshahana kaliya kuma koobna tababarista Ciidammada ee sidoo kale wuxuu quseeyaa in la qalabeeyo Ciidammada, walaalaha Turkiga ayaana qalabeyn doona”ayuu yiri Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan Safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga.
Safiirka ayaa sheegay in la tababari doono ilaa 25-kun askari, kuwaasoo isugu jira Ciidamo Boolis iyo Milateri, iyadoo la qalabeyn doono si amaanka ay u hantaan, waxaana uu intaa ku daray in qorshahan la horgeyn doono shirka Midowga Afrika uu bishan ku yeelanayo Addis Ababa iyo shirka bisha May ka dhici doona magaalada London.
Dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa sanadkii hore ku heshiiyay dhismaha iyo qalabeynta ciidamada qalabka sida, iyadoo qorshahan dhowaan ay ka doodi doonaan Baarlamaanka Soomaaliya, marka uu fasaxa ka soo laabto.